Nanotrona ny fanazaran-tenan’ny Barea ny ny Filoham-pirenena
Nanotrona ny fanazaran-tenan’ny ekipam-pirenena malagasy, Barea de Madagascar, ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara androany teny amin’ny Stade Saint Pierre, Akamasoa Andralanitra. Nitso-drano ny ekipam-pirenena malagasy ny Filoham-pirenena amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny tompon-dakan’i Afrika na ny CAN. Tsy adinon’ny Filoha ihany koa ny nanolotra fanomezana ho azy ireo ka nanolotra lela-vola 700 tapitrisa ariary ho an’ny ekipan’ny BAREA ny fitondram-panjakana malagasy hiatrehana ny CAN.
Marihina fa ny 14 ny volana jona izao dia mbola hiatrika lalao ara-pirahalahiana ny ekipam-pirenena malagasy ny baolina kitra, BAREA DE MADAGASCAR izay ao amin’ny vondrona B, izay hifanandrinany amin’ny MAURITANIE.
Filoham-pirenena manantanteraka ny velirano, filoham-pirenena mitondra avo ny fananatanjahantena. Androany, noporofoin’ny Filohan’ny Repoblika avokoa izany ary manantanteraka ny teny nomeny izy. Tonga nanotrona ny fanazaran-tena nataon’ny ekipam-pirenena BAREA DE MADAGASIKARA ny filoha tety amin’ny Stade Saint Pierre, Akamasoa Andralanitra.
Voalohany eto amin’ny tantaran’i Madagasikara no hisy ekipa malagasy hiatrika ny CAN. Fanomezana mendrika izany no notoloran’ny Filoham-pirenena ny ekipam-pirenena malagasy ary nitso-drano ihany koa ireto hitondra avo ny anaran’i Madagasikara any Egypte ireto ny tenany.
Zava-dehibe, hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny fanantonana ataon’ny FIloham-pirenena tahaka izao ka nankasitraka ny Filoha izy amin’ny fanohizana ny ezaka hanandratana ny baolina kitra malagasy.
Nitondra am-bavaka an’ireto ekipa malagasy hiatrika ny CAN ireto ihany koa ny Père Pédro ary nitso-drano azy ireo. Nankasitraka ny Filoha ny amin’ny fitiavana asehony ny kapiten’ny ekipa.
Ankoatran’ny Filohan’ny Repoblika sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay samy nanolotra fanomezana ho an’ny BAREA DE MADAGASCAR dia nanatrika ny fanazaran-tena ihany koa ny masoivoho ny Korea Atsimo ary nanolotra fanomezana ho an’ny ekipa malagasy. Hanohy ny fanazaran-tena eto Madagasikara ny ekipam-pirenena Malagasy mialohan’ny hiatrehana ny CAN ny 22 jona izao any Le Caire Egypte.